Sweater Women Cardigans Long Sleeve Knitted Clothes Casual Sweater Female Coat Spring Autumn Cardigan Gilet Femme Manche Longue na $ 32.99
Home Chevron ala akara ngosi Best ere Ngwaahịa Chevron ala akara ngosi Sweater Women Cardigans Long Sleeve Knite Clothes Casual Sweater Female Coat Spring Autumn Cardigan Gilet Femme Manche Longue
Sweater Women Cardigans Long Sleeve Knite Clothes Casual Sweater Female Coat Spring Autumn Cardigan Gilet Femme Manche Longue
Ahịa mbụ $ 65.98
Ahịa ugbu a $ 32.99
oji / S - $ 32.99 oji / M - $ 32.99 oji / L - $ 32.99 oji / XL - $ 32.99 oji / XXL - $ 32.99 oji / XXXL - $ 32.99 oji / 4XL - $ 32.99 oji / 5XL - $ 32.99 ụgbọ mmiri / S - $ 32.99 ụgbọ mmiri / M - $ 32.99 ụgbọ mmiri / L - $ 32.99 ụgbọ mmiri / XL - $ 32.99 ụgbọ mmiri / XXL - $ 32.99 ụgbọ mmiri / XXXL - $ 32.99 ụgbọ mmiri / 4XL - $ 32.99 ụgbọ mmiri / 5XL - $ 32.99 acha ọbara ọbara / S - $ 29.99 acha ọbara ọbara / M - $ 32.99 acha ọbara ọbara / L - $ 32.99 acha ọbara ọbara / XL - $ 32.99 acha ọbara ọbara / XXL - $ 32.99 acha ọbara ọbara / XXXL - $ 32.99 acha ọbara ọbara / 4XL - $ 32.99 acha ọbara ọbara / 5XL - $ 32.99 agba ntụ / S - $ 32.99 agba ntụ / M - $ 32.99 agba ntụ / L - $ 32.99 agba ntụ / XL - $ 32.99 agba ntụ / XXL - $ 32.99 agba ntụ / XXXL - $ 32.99 agba ntụ / 4XL - $ 32.99 agba ntụ / 5XL - $ 32.99
S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL size Chevron ala akara ngosi
nnweta: ntụgharị efu: en.general.icons.icon_check_circle akara ngosi 99 dị na ngwaahịa, dị njikere ka ebupu ya
MARA: Biko tụọ nju nha na nke gị tupu ịzụta !!! Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, enwere m obi ụtọ inyere gị aka !!!
1.Biko kwe ka 1-3cm iche iche ruru ntuziaka n'ihe.
2.N'ihi ihe ngosi dị iche iche na ihe pixel, agba nke ngwaahịa ahụ nwere ike inwe obere ọdịiche, ụcha n'ezie ga-emeri.
3. Biko lelee eserese nha nke ọma tupu gị tinye usoro.
Anyị na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ na-awụ awụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịkwụ ụgwọ ọ bụla, biko ziga email na aliexpress iji rịọ maka enyemaka.
1.Ọ bụrụ na ị nwere mbupu ọ bụla chọrọ biko kpọtụrụ anyị.
2. Anyị ga-ewepụta ngwugwu gị na ụbọchị 1-7 sochirinụ mgbe anyị natara ụgwọ gị
3.Anyị enweghị ike ijikwa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-egbu oge.
Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụtụ isi mbubata.
Weghachite ＆ nkwụghachi
Biko lelee ngwugwu na ihe nke ọma mgbe ịnata .Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla biko kpọtụrụ anyị. Ykwesighi ịmepe esemokwu.
Ezigbo Nzaghachi (5 Stars) ezighi ezi maka anyị, biko chee echiche ugboro abụọ tupu ịhapụ nzaghachi. Biko kpọtụrụ anyị tupu ịhapụ nzaghachi nke atọ (3 Stars) ma ọ bụ ihe ọjọọ (1-2 Stars). Anyị ga-anwa ike anyị niile iji dozie nsogbu ndị ahụ ma biko tụkwasi anyị obi.
Anyị bụ ndị na-enye elu-edu item na ọkachamara ọrụ, biko obi ike zuo m ahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ, biko kpọtụrụ anyị. Anyị na-ejekwa ozi maka akpụkpọ ụkwụ ahụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ebubata mmiri.